IPhone kutengesa mushure mekisimusi Iran zvirinani pane zvaitarisirwa | IPhone nhau
Ruzhinji rwevaongorori vanofunga zvinoita senge zvine musoro kwatiri tese: mushure memazororo eKisimusi, iyo iPhone kutengesa uye chero chigadzirwa chero chipi zvacho munyika chichava chakashata. Asi pane mumwe muongorori anotenda kuti kutya kwakanyanyisa kuwedzerwa gore rino uye kuti kutengesa kweapuro foni kuchaenda zvirinani kupfuura zvaitarisirwa nekuda kwekuda kwakanyanya kweiyo iPhone 7 Plus.
Muongorori ane tariro (akakodzera rwiyo) ndiTimothy Arcuri weCowen & Company, uyo achangopfuura atumira tsamba kuvashambadzi vayo inotaura kuti iyo iPhone 8 ichauya nechiratidziro chakaumbirwa dhizaini uye ma sensors akavakirwa mariri. Arcuri inotevera fungidziro dzakapfuura uye anofungidzira izvo 50.5 mamirioni achatengeswa iPhone iri pamusoro chikamu chechipiri chemari 2017, inoenderana naJanuary, Kukadzi naMarch. Mumushumo wake anoti zvakare iyo iPhone 7 ichatengesa mazana mashanu ezviuru, asi iyo iPhone 500.000 Plus ichatengesa mamirioni maviri kupfuura zvavainge vafungidzira pakutanga.
IPhone 7 Plus inosimudzira iPhone post-yeKisimusi kutengesa
El iPhone SE Ichabatsirawo zviyo zvayo zvejecha uye Arcuri anotenda kuti kutengesa kwayo kuchave kwakafanana neakawanikwa neiyo iPhone 5s mukota yekutanga ya2016, ndiko kuti, angangoita mamirioni mashanu ezvikamu.
Muongorori anotenda kuti Apple yakatengesa 76 mamirioni ePhones mukisimusi kota (Gumiguru, Mbudzi naZvita 2016), iyo yakapfuura fungidziro dzese. Hafu yekutengesa ikoko yakawanikwa neiyo iPhone 7, nepo 33% yevashandisi vakatenga iPhone 7 Plus. Iyo iPhone SE yakatengesa huwandu mumamirioni aizove ne "high single digit", ndiko kuti, izvo zvandinofunga zvingave zviri pakati pe7 mamirioni mayuniti.
Vaongorori vazhinji vanofunga kuti kutengesa kwe iPhone kuchadonha zvakanyanya mukota yechipiri ya2017, chimwe chinhu chavakatotenda kwekutanga, nekuti gore rino ndiro iPhone yechigumi uye hapana vashoma vashandisi vanozomirira kusvika Nyamavhuvhu kuti vatenge iyo inokatyamadza iPhone iyo runyerekupe runotaura nezvayo. Uri mumwe wavo here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Post-Kisimusi iPhone Kutengesa Kunenge Kuri Nani Kupfuura Zvinotarisirwa, Muongorori Anoti
Netflix inoputsa fungidziro uye inowedzera wechitatu vanyoreri kupfuura zvaitarisirwa